FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA JACKSHUND DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Jackshund Dog
Alika mifangaro Jack Dachshund / Dachshund
'Ity no alika Rusty. 3 taona izy amin'ity sary ity, ary a JRT / wirehaired Dachshund hazo fijaliana. '
Ny alika Jackshund dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Jack Russell Terrier ary ny Dachshund . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Ny alikako Millie dia fangaro Jack Russell / Dachshund. Jackshund no iantsoantsika azy. Millie dia ambany ambany noho ny lanjan'ny alika mifangaro ao aminy. Raha manodidina ny 15-17 lbs ny ankamaroan'ny Jackshunds, 12 lbs fotsiny i Millie. Alika be fitiavana sy mahonon-tena izy. Manana hodi-kazo mafy be izy, fa rehefa misy mampatahotra azy dia mampiasa azy io. Vao iray taona monja izy amin'ireto sary ireto. Tsy sarotra ny nitaiza azy fa nampiofana azy tsy hampiasa ilay efitra fandroana ao an-trano voaporofo fa fanamby. Handeha any amin'ny trano fidiovana ao an-trano izy indraindray, saingy mahatakatra izany, voalohany indrindra, mandeha no fotoana mety indrindra handehanana. Tiany ny milalao sy mihazakazaka miaraka amin'ny alikanay hafa, Jester, izay Cockeranian lehilahy 2 taona. Tiany ny milalao fakana ary mihazakazaka haingana araka izay tratra. Matanjaka sy mpanao fanatanjahan-tena izy. Amin'ny ankapobeny, hiteny aho fa nahazo ny tsara indrindra tamin'ny karazany roa. '
'Alikako ireto ry Mia sy i Mico. Ny renin'izy ireo dia Jack Russell Terrier ary Dachshund ny rainy. Mia manana be ny reniny ao aminy foana izy hyper ary vonona hilalao , fa i Mico kosa manana an-drainy bebe kokoa ao aminy fa alika tony sy kamo be izy. Samy folo taona izy ireo ary mbola manao toy ny alika kely. Tena be fitiavana koa ry zareo raha olona, ​​fa raha vao mahita alika hafa izy ireo dia lasa voa! Amin'ny ankapobeny, alika goavambe izy ireo ary tiako izy ireo. '
Jackshunds Mia sy Mico — i Jack Russell Terrier ny renin'izy ireo ary Dachshund ny rainy.
alika mena sy fotsy irama
Jackshunds Mia sy Mico toy ny zanak'alika kely mandry mifanila
Mia the Jackshund (Jack Russell Terrier / Dachshund mix) toy ny alika kely
Jackshund Sary 1
fahasamihafana amin'ny mpampijaly amerikana sy ny pitbull
alika omby aostraliana fetin'i collie afangaro alika kely alika
mainty sy fotsy kely pinscher
kilalao sy mpiandry ondry aostraliana kely
alika miteraka mainty fantsika
alika tsara indrindra ho an'ny alika hafa